အတွင်းလူတွေပြောတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာများ - Myanmarload
အတွင်းလူတွေပြောတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာများ
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ် က 02:39 June 20, 2017
လတ်တလောမှာ ပရိတ်သတ်တွေ အံ့သြသွားရလောက်အောင် ၀ိတ်ချပြီး အလှကြီးလှနေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ပုံလေးတွေဟာ မြင်သူတိုင်း
သဘောကျနှစ်သက်လို့နေကြပါတယ် ။ ထက်ထက်မိုးဦးခေတ်ရယ် လို့ ခေတ်တစ်ခေတ်ကို လွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး ကြော်ငြာဘုရင်မလို့နာမည်တွင်ကျန်ရစ်တဲ့
ထက်ထက်မိုးဦးဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုကာလအတန်ကြာရပ်နားထားခဲ့ပေမယ့် သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ လျော့ပါးမသွားဘူးဆိုတာ
အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်ချိန်မှာ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စိုင်းလွှမ်းနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သမီးလေး စစ်လွန်းဝတီထက်တို့နဲ့ အတူ မိသားစုဘဝလေးမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သူမ အကြောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
”ပန်..ပန်…ပန်…ပန်…ပန်..ပန်…” ဆို တဲ့ ကြော်ငြာ သီချင်းလေး ကြားရင် အဲ့ဒိခေတ်အခါကမှီခဲ့သူတွေက ကြော်ငြာဘုရင်မလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး ကို တန်းပြေးမြင်ကြမှာပါ ။ “ရတနာစိန်ကျောက်ဇယ်တောက်တိုင်း ကစားရအောင် ” ဆိုပြီး ကလေး လူငယ် မရွေး ပါးစပ်ဖျား မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူက ထက်ထက်မိုးဦး ပါ ။ ဒွေး နဲ့အတွဲ ညီခဲ့သလို လွင်မိုး နဲ့ လည်း ကားပေါင်းများစွာ ရိုက်ခဲ့သူပါ ။
“ထက်ထက် ရဲ့ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တဲ့ ဆံကေသာ……” အစချီ လို့ ဒွေး နဲ့ ကြော်ငြာ တဲ့ ခေါင်းလျော်ရည် ကြော်ငြာ ဆိုရင် လည်း ထက်ထက် ရဲ့ မှတ်တိုင်ပါပဲ ။ ဖုန်းတွေမပေါများသေးတဲ့ခေတ်၊ ဖေ့ဘုုတ်ဆိုတာကြီး ခေတ်မစားသေးတဲ့အချိန် မိသားစုပိုင် တီဗီတွေ မှာ ထက်ထက်မိုးဦးဆိုတာက ညတိုင်း ဖျော်ဖြေရတဲ့ ကြော်ငြာဘုရင်မ ။
ပရိသတ်အချစ်တော် ထက်ထက် မိုးဦး ကို တော့ ခရစ်သက္ကရစ် ၁၉၇၁ ခုနှစ် မေလ ၈ ရက် ၊ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၃၃ ခုနှစ်မှာ အဘ ဦး ခင်မောင်(ခ) ပန်းချီ မြတ်မောင် နဲ့ အမိ ဒေါ်ခင်မျိူးညွန့်တို့က မွေးဖွား ခဲ့ပြီးတော့ စနေသမီးလေး ထက်ထက်မိုးဦး ကို မူံရွှေရည် လို့ အမည်တွင်စေပါတယ် ။ အကို တစ်ယောက် ၊ အစ်မတစ်ယောက် ရှိတဲ့ မူံရွှေရည် က ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝမှာပညာရေး ကို မထူးချွန်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူ ပြည်သူချစ်မင်းသမီး တစ်ယောက် ဖြစ်အောင်တော့ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မိုးကုတ်သူ လေး မူံရွှေရည် က သူ့ဝါသနာ တွေ အကောင်အထည်ဖော် ဖို့အတွက် အနုပညာ လောကထဲ ကို ၁၉၉၁ -၁၉၉၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင်မှာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျန်းမာရေး ချူချာ ပြီး နုနယ်တဲ့ မူံရွှေရည် ကို ပြည်သူချစ် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသမီး ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ ဘယ်သူထင်ခဲ့မှာလဲ ။ ဒါပေမယ့် မူံရွှေရည် ကြိုးစား ခဲ့တယ်… အနုပညာ လောကက ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဒဏ်တွေကို မူံရွှေရည် အဖြစ်ကနေ ထက်ထက်မိုးဦး မဖြစ်မချင်း တောင့် ခံ ခဲ့တယ်။ ခိုင်မာလာနှင်းဆီ ကြော်ငြာကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရိုတ်ခဲ့တဲ့ မူံရွှေရည် က ကြော်ငြာဘုရင်မ ဖြစ်လာမယ် လို့ ဘယ်သူထင်ခဲ့မှာလဲ ။ နာမည်ရင်း နဲ့ ကြိုးစားပေမယ့် ကံကြမ္မာ မျတ်နှာသာမပေးလို့ ထက်ထက်မိုးဦး ဆိုတဲ့ နာမည် ပြောင်းပြီး ကြိုးစားချိန်မှာ ထက်ထက်မိုးဦးရယ် လို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
ပထမဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ တကယ့်လူ ဇာတ်ကားမှာ စိုးသူ ၊ စိုးမြတ်သူဇာတို့နဲ့ အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ ရဲအောင် မို့မို့မြင်အောင်တို့ နဲ့ အတူသရုပ်ဆောင်တဲ့ သရဖူဇာတ်ကား နဲ့ ပရိသတ်အသိအမှတ် ပြုခံခဲ့ရသူပါ ။ သူမ ဟာ ကြော်ငြာဘုရင် မ ဖြစ်ရုံသာမ က သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာလည်း ထူးချွန်ခဲ့သူတစ်ဦးပါ ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ပန်းသခင် ဇာတ်ကား နဲ့ ပထဆုံး အကယ်ဒမီ ကို ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော့ သမီးမိုက် ဇာတ်ကား နဲ့ အကယ်ဒမီထပ်မံ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထက်ထက် မိုးဦး လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေ ချိန်တုန်းက သူ့အောင်မြင်မူဟာ ကြောက်စရာပါ ။ ဇီးထုပ် တောင်မှ ထက်ထက်မိုးဦး ကြော်ငြာ လို့ ထက်ထက် မိုးဦး ဇီးထုပ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီး ခဲ့ပါသေးတယ်။
သူဟာ အလုပ်ကို ကြိုးစားတယ်..အာရုံစိုက်တယ်… သူအောင်မြင်နေချိန်မှာ ထက်ထက် မိုးဦး ဆီက ဇာတ်ကား ရိုက်ခွင့် ကြော်ငြာ ရိုက်ခွင့် ရဖို့က တော်တော် ခက်ခဲ လှပါတယ် ။ တန်းစီ စောင့်တာတောင့် ငြင်းပစ်ရသတဲ့….။ သူမ ငွေကို ရေလိုသုံးခဲ့တယ်..လှူ တာ ကမ်းတာကလည်း ရက်ရောတယ်..ထက်ထက်မိုးဦး ကောင်းစားချိန်မှာ သူ့အနားက လူတွေလည်း ကောင်းစားခဲ့လေရဲ့ ။ အပြောဆိုး ပေမယ့် စိတ်ရင်းကောင်း တဲ့ ထက်ထက် နဲ့ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ဆုံတော့ ” ဟဲ့…..အလုပ်ဆိုတာ သေချာ လုပ်ရတယ်…. အလုပ်အပေါ်မှာ လေးစားမှ အလုပ်ကလည်း ကိုယ့်ပေါ်လေးစား မှာ ” လို့ ပြောပြခဲ့ ဘူး သလို အင်တာဗျူး မေးလို့ သူ့ကို စိတ်ရူပ်စေတဲ့ မေးခွန်းမေးရင်လည်း ” ဟယ်…ဘာတွေ မေးနေတာလဲ. ပေါက်တက်ကရတွေ ” ဆိုပြီး ပြောတက်ပါသေးတယ်။
သူမ အနုပညာ လောကမှာ လူချစ်လူခင်ပေါသလို လူမုန်းလည်း များခဲ့လေ ရဲ့။ အရင်က ဆို မောင်နှမတွေလို အတွဲ ညီခဲ့ တဲ့ ရန်အောင်က ထက်ထက်မိုးဦး နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ” ထက်ထက် က တကယ်တော်တယ် …သူက အပြောသာဆိုးပေမယ့် စိတ်ရင်းကောင်းတယ်..” လို့ပြောခဲ့ သလို ဒါရိုတ်တာ ကိုဇော် ရိုက်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား press conference တုန်းကလည်း ” ထက်ထက်ရယ်…နင် ဝိတ်လျော့ပြီးအနုပညာ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်စမ်းပါ….နင့်ပရိသတ်အင်အားဒီလောက်များတာ ” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦး က ထက်မြတ်တယ်။ ဒေါသကြီးတယ် ။ စိတ်ဆိုးစိတ်တိုလွယ်တယ်။ အသန့်ကြိုက်လွန်းတယ် ။ အသန့်ကြိုက်တက်တဲ့ ထက်ထက် က စားသောက်ဆိုင်တွေရောက်လို့ အိမ်သာသွားချင်ရင်တောင် တယောက်ယောက်ကို သန့်ရှင်း လား ညစ်ပတ်လား အခြေအနေ သိအောင် အရင်ကြိုသွားကြည့်ခိုင်းတက်သူပါ။ ” ကြီးကျယ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး ထက်က နှလုံးမကောင်း ပါ ” ဆိုပြီ ပြောတက်သူပါ။
အခု ကလေး တစ်ယောက်မိခင် ထက်ထက် မိုးဦးက အရင်လို ပိန်ပိန်သေးသေးမဟုတ်တော့ ။ ကလေးမွေးပြီး ကာလတခု အချိန်ထိ ဝဝ ကစ်ကစ်လေးနဲ့ ရှိခဲ့ဖူးသလို ရန်အောင်မွေးနေ့မှာတောင် သီချင်းတက်ဆိုခဲ့သေးတာပဲ ။ သူမ ဝ နေတဲ့ အချိန်မှာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရင် ” လှတာလေး ထည့် ၊ ပြင်ပေးနော်..ပိန်အောင်လုပ်ပေးနော် ” ဆိုပြီး ပြောတက်ပါသေးတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦး ဘယ်လိုပုံပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသံကြားတာနဲ့သူမ ပရိသတ်တွေမှတ်မိပြီးသားပါ ။
အနုပညာမျိူးဆက် အနေနဲ့ တစ်ယောက်မွေး တစ်ယောက်ထွန်းပေါက်တာ က သူ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီး လေး စစ်လွန်းဝတီထက်ပါ ။ ကြော်ငြာတွေ ပြက္ခဒိန်ပေါင်းများစွာ ရိုက်ခဲ့ ပြီး တော့ ” မေမေ့လို မင်းသမီးလုပ်မှာ ” တဲ့လေ ။ ထက်ထက်နဲ့ အရင်တခေါက်တွေ့တော့ “ထက်ထက် ခု ဝိတ်ချနေတယ် .” ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး ကို နောက်တခေါက် ပြန်တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ ပိန်ပြီးလှနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။
” အနုပညာ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ချင်တယ်..ပရိသတ်တွေ အတွက်.ပေါ့… အခုချိန်မှာ အသစ်တွေ အရမ်းပေါလာတော့ အားလုံးက ထက် ကိုမေ့နေကြပြီထင်ပါတယ် ” လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ခုချိန်မှာ ဇာတ်ကား ရိုက်ရတာမရိိုတ်ရတာထက် နာမည်မသေပဲရှိနေသေးတာ ထက်ထက်မိုးဦးပါ ။ပရိသတ်အချစ်တွေ မသေဆုံးသေးတာ ထက်ထက်မိုးဦးပါ။ သူ မသိလို့ပါ ။ သူမ ပရိသတ်တွေက ” ပန်ပန်ပန်ပန်ပန်ပန်ပန်” ကြော်ငြာလေး နဲ့ အတူ ထက်ထက်မိုးဦး ကို စောင့်နေကြတယ် ဆိုတာ……။
မောင်လေးတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ဆံကေသာအလှနဲ့ ညှို့ယူဖမ်းစားလိုက်တဲ့ မတ်မတ်နွယ်ဒါလီထွန်း